Ezi ziindaba ezikwi-watchOS 6 kunye ne-tvOS 13 | Iindaba zeGajethi
Nantsi into entsha kwi-watchOS 6 kunye ne-tvOS 13
Ngelixa i-Apple WWDC yalo nyaka i-2019 isaqhubeka kwisixeko saseSan Jose, sinokuthi sele sineendaba ezintle kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza eziza kufika kwiinyanga ezizayo kwizixhobo zeApple. Kule meko sifuna Gxila kuyo yonke ingqalelo kwi-watchOS 6 entsha kunye ne-tvOS 13, Iinkqubo ezisebenzayo zeewotshi ezikrelekrele zeApple kunye nebhokisi yayo ephezulu ebekiweyo
Okomzuzwana abaphuhlisi kuphela kwabo banokufaka ezi nguqulelo ze-beta (Nangona kunokwenzeka ukuba uzifake ungakhange ube ngumqambi) kwaye kwimeko yewotshi ye-Apple, kungcono ukuba uphume kuyo kuba akukho ndlela yokubuyela kwi-OS yangaphambili nangayiphi na indlela kwaye kwimeko yeengxaki iApple ayikhathaleli. Ngayiphi na imeko, eyona nto inomdla kuthi kukubona iindaba kwaye siza kuba nexesha lokuzonwabela ke masizifikele.
1 I-watchOS 6 iphucula imisebenzi yezempilo kunye nemidlalo
2 Ivenkile eyahlukileyo kwiVenkile yeApple
3 Amanqanaba amatsha, izixhobo ezingakumbi kunye nolunye usetyenziso
4 Yintoni entsha kwi-tvOS 13
5 I-akhawunti eninzi kwi-Apple TV
6 I-Apple Music, iApple Arcade yemidlalo kunye neescreen ezitsha
I-watchOS 6 iphucula imisebenzi yezempilo kunye nemidlalo
Nge Isicelo esitsha esibizwa ngokuba yiCycle Tracking, yaqala intetho ephambili ngokubhekisele kwiindaba ze-Apple Watch. Esi sicelo sitsha sigxile ngqo kwabasetyhini kwaye siyabavumela ukuba babhale idatha ebalulekileyo yomjikelo wokuya exesheni, jonga uqikelelo lwezigaba ezilandelayo kunye namaxesha achumileyo. Le ayizukuba yinkqubo ekhethekileyo yeApple Jonga njengoko iApple iyongeza kwi-iOS ye-iPhone, ukuze abasebenzisi bayonwabele kwifowuni yabo ene-iOS 13.
Enye into enqabileyo kule watchOS 6 intsha ijolise ngqo kwimpilo yokuva. U-Apple ufuna ukuba siphucule imikhwa yethu kwaye sikuphephe ukulahleka kwindlebe kangangoko kunokwenzeka okunxulumene nokuhla kwengqondo. I-Apple Watch kunye insiza yengxolo ivumela bonke abasebenzisi ukuba bazi amanqanaba engxolo kwiindawo ezinjengeekhonsathi kunye nemidlalo ezinokuthi zichaphazele kakubi ukuva. Umlindo uya kusazisa ngesaziso xa isandi sangaphandle sifikelela kwii-decibel ezingama-90, inqanaba elinokuchaphazela ukuva ukuba umsebenzisi ubonakalisiwe kulo ngaphezulu kweeyure ezine ngeveki, ngokwe-World Health Organisation.
Ukuphucula impilo yomzimba, ukuphucula impilo, indawo ezintsha ezinamandla ngakumbi kunye nevenkile yesicelo yeApple Watch ngokwayo zikwindlela eshwankathelweyo yeyona ncwadana imnandi iboniswe ngoMvulo odlulileyo kwiZiko leNgqungquthela laseMcEnery. UJeff Williams, igosa eliyintloko lokusebenza lika-Apple ucacisile kwimithombo yeendaba:
I-Apple Watch iyeyona nto ibalulekileyo kuyo yonke into eyenziwa ngabathengi bethu yonke imihla, ukusuka ekunxibelelaneni nasekwazini ukuzikhuthaza ukuba baphile ubomi obunempilo kunye nokusebenza ngakumbi. I-watchOS 6 lelinye inyathelo lokuzinikela kwethu ekuncedeni abasebenzisi ukuba baphathe ngcono impilo yabo kunye nokuqina ngezixhobo ezitsha ezinamandla ezizezakho
Ukongeza, iApple ngoku inayo isishwankathelo esitsha sedatha yomsebenzi wethu kunye nenkqubela phambili esiyenzayo ngesixhobo njengoko siqeqesha. Iwotshi ilinganisa yonke idatha kunye nethebhu entsha esinokuyibona kwi-iPhone iya kusibonisa ngendlela elula necacileyo ukuba idatha inyuka okanye yehla kangangexesha elimalunga neentsuku ezingama-90. Ukuba ezi datha ziyehla ngokubhekisele kwimisebenzi yethu yomzimba yonyaka ophelileyo, isicelo ngokwaso siya kusinika iingcebiso zokufumana kwakhona inqanaba loqeqesho.
Ivenkile eyahlukileyo kwiVenkile yeApple
Eli lixesha lokuqala apho ivenkile yesicelo iya kuba ngqo kwiwotshi kwaye ngenxa yoko Inika isixhobo inqaku elinye lokuzimela kwi-iPhone. Ivenkile entsha iya kuvumela abasebenzisi ukuba bafake izicelo zabo, bakhangele ngeSiri, ngokuBhala okanye ngokuBhala ngesandla kunye nokujonga amaphepha eeapps ezilungiselelwe i-Apple Watch sphere. Inyathelo elikhulu njengoko sisitsho kwinkululeko epheleleyo yeso sixhobo kancinci siphawula umhlaba emva kokongeza unxibelelwano lwe-LTE kunye ne-eSIM kwimodeli ye-4.
Oku kwakunjalo enye yezona zinto zibalulekileyo zabasebenzisi Iwotshi ye-Apple ekrelekrele kwaye iya kuhlala ibonwa kweliphi inqanaba labaphuhlisi ababandakanyekayo, nangona sele silumkisile ukuba inyathelo lilungile. Okwangoku, ukukhetha ukhetho sele kulungile kwaye siza kubona ukuba lo mbandela wevenkile uqhubeka njani ngokuthe ngqo kwi-Apple Watch.
Amanqanaba amatsha, izixhobo ezingakumbi kunye nolunye usetyenziso
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeemfuno ezingapheliyo kukuba nayo Ukucofa ngakumbi kufumaneka kwiApple Watch Kwaye iApple iyaqhubeka nokongeza uhlaziyo olutsha lwewindows. Kule meko kuye kwakho izongezo ezininzi kodwa okwangoku asinayo eyethu i-«sphere store» yomsebenzisi ukuba ayikhethe. I-Apple ihamba inyathelo ngenyathelo kule meko kwaye ubungqina boku kukuba nganye yeenguqulelo ezintsha ezikhutshiweyo zongeza ezinye iinkalo kule meko: I-Modular Compact, iSolar Dial, iCalifornia, iGradient neNumerals.
Izixhobo ezitsha zoPhuculo ziquka ukuSasaza iAudio, iRadiyo kunye nePodcast API, i-API eyandisa ixesha elongezelelweyo kwimisebenzi esekwe kwiseshoni enje ngonyango lomzimba kunye nokucamngca, kwaye ngoku iCore ML isebenzisa iNjini yeNeural yeApple kwiApple yeWatch Watch 4 ukukhawulezisa ukwenziwa kwedatha yesixhobo.
Kwaye njengezicelo sigxila kwiapp eyaziwayo Amanqaku ezwi, Iincwadi ezimanyelwayo ezithengwe kwiiApple Books ezinokumanyelwa ngokuthe ngqo kwiapp entsha Iincwadi ezimanyelwayo, usetyenziso Calculator, Las ubuze ngasese ingabonisa iziphumo ezizeleyo zamaphepha ewebhu ngokuthe ngqo kwiyure nakwi Ukuhambelana kweApple GymKit ukwandisa kubavelisi abanjengoOctane Fitness, UKWENZA KWENENE, kunye neWoodway.
Yintoni entsha kwi-tvOS 13
Kule meko, eyona nto intle nge-tvOS 13 okanye ebangele eyona mpembelelo kwintetho yayikukuhambelana kolawulo lwePS4 kunye neXbox consoles ngeApple TV. Oku kwenza i-tvOS 13 inike umdla kubasebenzisi kwaye bafuna ukufaka le nguqulo intsha ngokukhawuleza. Sebenzisa abalawuli abaphambili nabaziwayo kwihlabathi, I-Xbox One S kunye ne-PlayStation DualShock 4 Yayiyindaba ebaluleke kakhulu kwilizwi eliphambili kwaye ngoku kuya kuba lula kunangaphambili ukufumana okuninzi kwiApple Arcade kunye neminye imidlalo emininzi esinayo kwiApple TV. Inokukwenza ukuba ucinge ngokuthengwa kwezi zixhobo ngabasebenzisi abangenazo namhlanje, hamba kakuhle iApple!
Ukongeza koku, ngokucacileyo ukuphuculwa kwe-tvOS kunxulumene nonxibelelwano lwasekhaya kwi-Apple TV. Ngoku abasebenzisi baya kuba nayo isikrini sasekhaya esitsha esenzelwe ukufumanisa ukuba yintoni entsha. Iiapps zinokudlala ukujonga kuqala isikrini esigcweleyo kwisikrini sasekhaya, ukuze abasebenzisi bonwabele kwangoko uluhlu lwabo abaluthandayo, iimovie, iingoma kunye nemidlalo.
I-akhawunti eninzi kwi-Apple TV
Enye into enomdla kule TVOS 13 yile ibhekisa kumandla okongeza iiakhawunti ezininzi zomsebenzisi kwisixhobo esinye. Ngale ndlela, lonke usapho lunokonwabela amava okuzonwabisa alungiselelwe umntu ngamnye kwaye izindululo ziya kusekelwa kukhetho lomntu ngamnye kubo. IZiko elitsha loLawulo likwavumela abasebenzisi ukuba bafikelele ngokukhawuleza kwezona zinto ziphambili ze-Apple TVezinje ngokulala kwenkqubo kunye nokuphuma komsindo. Sebenzisa le nkonzo kuyimfuneko ukuba iiakhawunti zidityaniswe kwaye kule meko phakathi kwamalungu osapho olunye.
I-Apple Music, iApple Arcade yemidlalo kunye neescreen ezitsha
Iindaba kwiApple Music yeApple TV zinomdla ngakumbi ngokunxulumene nokukhetha kwabasebenzisi abaninzi esixoxe ngako ngasentla. Umntu ngamnye uya kuba nakho ukudlala uluhlu lwabo, baya kuba neengcebiso zabo ezenzelwe wena malunga nezinto abazithandayo zomculo kwaye baya kuba nokufikelela kwiingoma ezidlalayo. Kwelinye icala I-Apple Music yeApple TV iya kongeza amazwi eengoma zethu esizithandayo Ngqamene nescreen ukuze ukhetho lwe "karaoke" luqinisekiswe ngale tvOS intsha.
Apple Arcade Enye yeendaba ukuba abasebenzisi balinde i-Apple TV ukuba ifike kwaye kule meko iya kuba ekwindla xa isungulwa ngokusesikweni kwi-Apple TV 4K. Le nkonzo isivumela ukuba sibe nokufikelela okungenamkhawulo kwimidlalo engaphezu kwe-100 ngomrhumo omnye. Kule meko, ukufikelela kunqunyelwe kubasebenzisi abathandathu abasuka kusapho olunye, ukonwabela imidlalo yeApple Arcade kwi-iPhone, i-iPad, iPod touch, iMac kunye neApple TV kuya kuba lula ngenene kusapho lonke.
Okokugqibela, ukuchukumisa i-Apple TV yamaphephadonga kuhlala kwamkelekile. Kule meko kunjalo Izikrini ezitsha ze4K HDR ezifumanekayo kwiApple TV 4K. Ezi ziividiyo zokuntywilisela, ezifotwe ngokudibeneyo kunye neqela leYunithi yeMbali yezeNdalo ye-BBC (ejongene ne "Blue Planet") kubunzulu bolwandle lwehlabathi kwaye isibonisa ezona meko zimangalisayo kunye nezidalwa zolwandle kwiApple TV yethu.
Kwaye akukho nto ingako unokuyithetha kule meko ngaphandle kokuphuculwa kwe-watchOS 6 kunye ne-tvOS 13 bekulindelwe kwaye kungcono kunokuba bekulindelwe. Kwelinye icala, ukuvuza kuhlala kuyenzakalisa le ntetho, kodwa le yinto esingenakuyiphepha kwaye ehamba nazo zonke iintlobo zeziganeko ezifanayo. Ngokuqinisekileyo I-Apple iphucula kakhulu ubumfihlo, ukhuseleko kunye nozinzo lwe-OS yayo kwaye yongeza ukuphuculwa kokusebenza ngenxa yoko kufuneka silinde ezi nguqulelo ukuba zifike ngokusemthethweni ukuze sikwazi ukuzifaka kwizixhobo zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Nantsi into entsha kwi-watchOS 6 kunye ne-tvOS 13
I-Realme 3 Pro sele ithengiswa eSpain ukusuka kwi-199 Euro
Ukuphonononga kwakhona ikhamera ye-wifi yangaphakathi Ezviz CTQ2C